Nyowani Apple Mavhidhiyo pane iyo Apple Tarisa Series 4 | Ndinobva mac
Nyowani Apple Yekuona Series 4 Mavhidhiyo paKushanda uye Zvakaipa
Mushandirapamwe weKisimusi wave pedyo nekona uye Apple inoda kuti munhu wese azive nezvazvo nyowani Apple Watch Series 4 uye mashandiro atinawo pamaoko edu, nekungotenderedza ruoko. Imwe yetsika nzira dzekushambadzira zvigadzirwa zvako kuisa yako mavhidhiyo kuYouTube.
Pane ino chiitiko, Apple inotiratidza zvakanakira chirongwa chekudzidzisa, chii chinokunda mhando uye kutsva pachiratidziri Series 4 uye maitiro ekushandisa emergency emergency SOS mode, iyo yakachengetedza hupenyu hwakawanda kusvika nhasi kune vashandisi veese mazera.
Muvhidhiyo yekutanga, anotiudza nezve iyo kurovedza basa. Iye anoongorora kunyorera, kubva panguva yatinotanga kudzidziswa newachi. Pfungwa huru kutanga sei kurovedza muviri nekungo tepa mashoma pane wachi wachi. Gare gare, tinoona rarama kudzidzisa chikamu uye inotiratidza mashandisiro atingaite a kufambira mberi kwekutevera nguva dzose. Mushure mekupedza iko kurovedza, inotiratidza iyo chidimbu chechikamu zvaitwa.
Chechipiri, ivo vanotiudza maitiro ekumisikidza iyo SOS basa pane yedu kifaa. Tinogona kuona muvhidhiyo iyo, nekungobata pasi bhatani repadivi uye kusarudza iyo yekukurumidza kufona sarudzo, ichaita yakakodzera kufona. Apple zvakare inokuratidza nzira yekuwana yako ruzivo rwekurapa muchiitiko chekuti vashandi vehutano vanoda chero ruzivo mune izvi.
Apple haisiye chero akasununguka magumo mune ino kifaa, yakagadzirirwa kurovedza muviri uye hutano. Rangarira kuti zviito izvi zvinogona kuitwa nemaenzaniso pamberi peSystem 4. Zvakajairika kuwana kukwidziridzwa kwechimiro ichi mushandirapamwe wekusimudzira, panotangwa mhando itsva yewatch pamusika.
Zvichida kubva kuvhurwa, iyo Apple Watch Series 4 yanga iine matambudziko ekutakura, nekunonoka kunosvika mazuva makumi matatu. Iyo kambani yagadzirisa iyi diki stock kuzorora nekuhaya masevhisi eimwe fekitori.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Nyowani Apple Yekuona Series 4 Mavhidhiyo paKushanda uye Zvakaipa
Ino ndiyo vhiki yakakosha, kuchave nekutaura kukuru muna Gumiguru?
Luminar yeMacOS ichavandudzwa neitsva maficha ekuvandudza matenga